musha nyika dzakabatana Singers 50 Cent Childhood Indaba Nezve Untold Biography Facts
Yedu Biography ye50 Cent inokuudza Chokwadi nezve rake rehucheche nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Net kukosha uye Hupenyu hwega.
Muchidimbu, iyi inyaya yerwendo rwaCurtis James Jackson III, kubva pamazuva ake ehudiki, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Sezvo pa2020, pamwe wakamuona achifamba - senguva iyo 50 Cent inoti 'F-k Donald Trump' vhiki imwe mushure mekutaura kutsigira mutungamiri wenyika. Kunyangwe izvi, isu tinofunga iwe unoziva zvishoma nezve Hupenyu Hwake Hupenyu. Iye zvino pasina imwezve nzira, ngatitangei.
50 Cent Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga / Hwemhuri
Curtis James Jackson III, anozivikanwa nehunyanzvi sa50 Cent akazvarwa pazuva rechitanhatu raChikunguru 6 mudhorobha reQueens, New York City. 1975 Cent akazvarwa ari kuruboshwe kuna mai vake vanononoka gangster, Sabrina Jackson uye vamwe vasingazivikanwe Baba, Curtis James Jackson. Sabrina Jackson akamubata aine makore gumi nemashanu chete.
50 Cent yakakurira nemukadzi asina kuroorwa ari munharaunda yeJamaica. Amai vake vakashanda sevatengesi vezvinodhaka uye vakaurayiwa vachiuraya mumoto usina kutsanangurwa apo Jackson aiva nemakore masere chete.
Mushure mekufa kwamai vake, mbuya vake vanoratidzwa pazasi vakatora iro basa rakaoma rekurera 50 Cent vari vega.
Aive nehukomana hwekushuvira kuve mutambi wetsiva uye akarwa padiki junior. Akatanga tsiva pazera ramakore 11. Pazera re12, 50 Cent akatanga kutengesa zvinodhaka. Ambuya vake vakafunga kuti aive muzvirongwa zvekupedza chikoro. Aive akashinga zvakakwana kuti auye nepfuti nemari yezvinodhaka kuchikoro kwake. Mugiredhi regumi iro, akabatwa nevanoona simbi paAndrew Jackson High Chikoro: “Ndakanyara kuti ndakasungwa saizvozvi… Mushure mekunge ndasungwa ndakarega kuzvivanza. Ndanga ndichiudza ambuya vangu [pachena], 'Ndinotengesa zvinodhaka.' ” Pazera remakore gumi neshanu, 50 Cent akatenga pfuti yake yekutanga. Paaive nemakore gumi nemapfumbamwe, akazova mushonga wevavakidzani, achitengesa zvinodhaka anokosha madhora zana nemakumi mashanu pamwedzi. Ino yaive nguva yaakasiya chikoro chepamusoro uye akazova akazara gang nyeredzi sekuonekwa pazasi.
Musi waJune 29, 1994, paakanga aine makore gumi nemapfumbamwe, Jackson akasungwa nekutengesa ndiro nhatu dzecocaine kumupurisa aiviga. Akasungwa zvakare masvondo matatu gare gare apo mapurisa akatsvaga mumba make ndokuwana heroin, gumi maunzi echikorokoreti uye pfuti yekutanga. Akatongerwa makore matatu kusvika mapfumbamwe mutirongo, asi zvakadaro, akashanda mwedzi mitanhatu mukamba yebhutsu uye akawana GED yake. Akataura kuti haana kushandisa cocaine iye.
VERENGA Robert Downey Jr Kukura Kwemhuri Nhau Uye Untold Biography Facts
Jackson mushure mekusunungurwa akagamuchira zita rezita "50 Cent" sedimikira rekuchinja nzira dzake. Zita iri rakafemerwa naKelvin Martin, 1980s gororo rekuBrooklyn uyo aizivikanwa sa "50 Cent"; Jackson akazvisarudzira zvikonzero zvaakatsanangura mumashoko ake… “Zita rinotaura zvese zvandinoda kuti ritaure. Ini ndiri mumwe chete munhu wemunhu 50 Cent aive. Ndinozviriritira neimwe nzira. ” Akatanga kubvarura aine makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa kwevamwe shamwari. Haana kumbove nebasa chairo hupenyu hwake hwese.
50 Cent Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Kudengenyeka uye Kutema
50 Cent akambobayiwa neboka raJa Rule achinyora mu studio.
Zvakare muchirimo cha2000, 50 Cent akapfurwa kumeso, ruoko nemakumbo nemurume ane mamirimita mapfumbamwe padhuze padhuze. Rapper weNew York akanhonga maronda muruoko rwake, ruoko, chiuno, makumbo ese, chifuva uye kumeso (dama rekuruboshwe). Akapona mabara mapfumbamwe. Imwe yemabara yakagara muzamu rake rezasi. Pachine ronda rakapunzika uko akati wandei mazino ake ekumashure aimbove. Ronda rebara kushaya rakachinja izwi rake ndokupa 50 Cent ruzha rwakasiyana.
Zvizhinji gare gare muhupenyu hwake, akamhan'arirwa nachiremba wemazino uyo akamutarisira mushure mekupfura. Nhasi, murume-matatu chengetedzo tsananguro haina kukwana kudzivirira 50 Cent. Anopfeka bhandi-risingapfuure chitendero, sezvinoita nhengo mbiri dzevashandi vake veG-Unit.
50 Cent Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Kukurira Mukurumbira
Akadzokera kumimhanzi mushure mokunge awana uye akaita zvinyorwa zvishoma zvebhadhiro neshamwari dzake Lloyd Banks naTony Yayo, sevashandi vainzi G-Unit. Kuedza kwavo kwakasvika pakucherechedza Kucho uye Dr. Dre, uyo akanzwa 50 Cent's "Fembera Ndiani Akadzoka?" mixtape muna 2002 uye vakamusayina pamwe chete kumazita avo, Shady Records uye Aftermath Entertainment.
VERENGA Sylvester Stallone Childhood Story Plus Untold Biography Facts
50 Cent's dambarefu album, Iva Wakakosha Kana Kufa Kuedza,' yakagadzirwa na Kucho uye Dre. Kwaive kubudirira kukuru kwekutengesa kwakazotengesa mamirioni mapfumbamwe. Iva Wakapfuma yakateverwa muna 2005 neimwe hit hit album, The Massacre, apo Jackson akaenderera mberi kupopotera pamusoro pehupenyu hwake hwepakutanga pamitambo yakafanana “Chitoro Chemakenduru” uye "Ingori Lil Lil."
Akabva atanga pachake achinyora pasi peumbrella yeInterscope, achisayina Lloyd Banks uye Young Buck, uye akazviisa muG-Unit boka pa 2004 album Beg for Mercy, iyo yakatengesa kupfuura mamiriyoni e5 makopi munyika yose. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
50 Cent Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
50 Cent ane mwanakomana anonzi Marquise Jackson nekuda kwehukama hupfupi naamai, Shaniqua Tompkins. Shaniqua Tompkins Hunhu hweAmerica. Iye ane mukurumbira kune makumi mashanu emakore`s ex-girlfriend.
Pasi pane mufananidzo wemwanakomana wavo, Marquise uyo ane ukama hwakaoma zvikuru nababa vake.
Rapper 50 Cent akambomupomerwa nekaimbova musikana wake uye amai kumwanakomana wavo Shaniqua Tompkin. Maererano naNksk Tompkins, mureri ari kuedza kumudzinga iye nemwanakomana wavo, Marquise, kubva kumusha wavo Long Long. Izvi zvakatsanangura ukama hwakaoma pakati pebaba nemwanakomana. Pasi pane mufananidzo waMarquise pamwe nemamu wake achitarisa vose vakakura.
Uyezve mushure mekune hukama hwepfupi naDaphne Joy, mwanakomana wake wechipiri, Sire Jackson akaberekwa.
Senge panguva yekunyora, 50 muzana haina kuroora asi rapper ari kunyeperwa kuti akafambidzana nhamba huru yevakadzi. 50 Cent anga ari muhukama naTattedup Holly (2013 - 2015), Chelsea Handler (2010), Ciara (2007 - 2012), Joy Bryant (2005), Vivica A. Fox (2003), Meagan Good (2001 - 2002).
50 Cent anga asangana naLindsay Lohan (2010 - 2011), Kim Kardashian West (2009), Paris Hilton (2008), Layla Rumi (2006), Karrine Steffans, Dollicia Bryan naNia Long.
50 Cent Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Inobata Kuteerera
50 Cent inotora basa rinoshamisa zvikuru uye rinonzi rakarashika pamusoro peiyo 4 (54lbs) yebasa rerwere chekenza mufirimu 'Zvinhu Zvinoparadzana', iyo yakabudiswa zvakare muna February 2012.
Akarasikirwa huremu masvondo mapfumbamwe mushure mekumwa mvura uye achimhanya pane yekutsika maawa matatu pazuva. 50 Cent inoridza inotungamira hunhu Kanan mune yake hit TV show Power, iyo inowanikwa paTV network Starz.
Murape ndiyewo mutongi mukuru wekuratidzwa.
50 Cent Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Mutambo Kwaiye
50 Cent chaizvoizvo ane vanhu vaviri vakasiyana-siyana-vatatu vhidhiyo yemavhidhiyo yemavhidhiyo anotarisa pachake.
Mutambo wake wokutanga '50 Cent: Bulletproof ' yakasunungurwa mu2005 uye yakanga iripo pane PlayStation 2, Xbox uye Xbox 360 mazano. Izvo apo sequel, iyo yakasunungurwa mu 2009, yakabuda pane PlayStation 3 uye Xbox 360.
50 Cent Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Kushungurudza
Sekureva kwaForbes, 50 Cent mambure akakosha kupinda mugore ra2015 paakaziviswa seanokosha madhora zana nemakumi mashanu nemashanu emamiriyoni muhurongwa hwavo hweHip-Hop hwaVapfumi Vagore.
Zvisinei, hondo yakareba yematare inonzi yakaona mumbure wake akakodzera kuwira nechekunodarika madhora 200 mamiriyoni, achibva amusiya achida kubhadhara. Nzvimbo yepaIndaneti Inonyanya kukoshesa Inofanirwa kuti 50 Cent ikozvino inokwana $ 20 mamiriyoni. Nokuda kwemafirimu ake achangobva kuitwa uye mamwe mazamu, izvi zvinonzi mari inofanira kunge yakawedzera.
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai nekuverenga yedu 50 Cent Yevacheche Nyaya uye isingazivikanwe biography chokwadi. Pahudiki Biography, isu tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana kubvunza isu!.